Ehlobo 2016, thola amabhishi athule kakhulu ePortugal | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Amabhishi, Portugal
Ihlobo liyeza futhi akunakwenzeka ukuthi singacabangi ngokuthi sizokwenzani, sizoyaphi, uma sifuna izintaba, ulwandle noma idolobha njengendawo yokuvakasha. ISpain isondelene kakhulu nePortugal, ngakho-ke Amabhishi asePortugal ahlala eyisilingo esikhulu.
IPortugal inamabhishi amaningi amahle kanti amanye athandwa kakhulu, kepha akuwona wodwa. Uma ufuna ukubalekela abantu, amanani abizayo nezixuku futhi umane ufuna indawo ngasolwandle ukuze uphumule umzimba nomphefumulo wakho, lapha amanye amabhishi athule futhi amahle kakhulu ePortugal. Hamba uyozitholela kuleli hlobo lika-2016.
Kuyiqiniso ukuthi enye yezindawo ezinhle kakhulu ezisogwini ePortugal yi-Algarve. Igxila enanini elikhulu kakhulu lamabhishi athandwayo kepha kuhlale kunesikhala se- Amadolobha asogwini awavakashelwa kakhulu, aqhelelene kakhulu, ngamanani ajwayelekile emaphaketheni ethu enkinga yaphakade yezomnotho. Futhi into enhle kakhulu ukuthi abanabo abantu abaningi kangaka abazungezile, benza umsindo, abaphazamisa ukuthula kwakho kwehlobo okufanelekile.
3 UVila Nova de Milfontes
Le ndawo esenyakatho nolunye ulwandle esizoyincoma, iSagres. Ihlala ogwini olusentshonalanga ye-Algarve. FUTHIKungolwandle oluse-Atlantic okungokwedolobhana elincane laseCarrapateira, ohlangothini lwegquma, okuyikhilomitha nje ukusuka ogwini
Yize incane, ithola izivakashi futhi inikeza izindlu zezivakashi ezincane namakamelo angasese ukuthi abanikazi babo babeqasha intela. Idolobha empeleni linamabhishi amabili, zombili zinesihlabathi esihle futhi esihle futhi zinezimo ezinhle zokuntweza phezu kwamagagasi. Empeleni kwesinye sazo kuyasebenza isikole esincane se-surf abaningi beza ikakhulukazi ukuzoqeqesha noma ukufunda. Futhi uma uthanda umlando, ungahlala uthatha uhambo lokuya enqabeni yakudala eyakhelwe ukuzivikela kubaphangi ngekhulu leshumi nesikhombisa.
Le ngenye yezindawo ezaziwa kakhulu phakathi kwalezi zindawo ezithule esizibuyekeza namuhla. Kungumasipala waseVila do Bispo ogama lakhe lisuselwa ku- Ngcwele Kubukeka sengathi ngaphambi kobuKristu imiphakathi ehlukene yayikhonza onkulunkulu bayo kusuka lapha. Kakade emlandweni osondelene kakhulu uSagres uhlobene kakhulu nohambo lwasolwandle lwasePortugal futhi waze wahlaselwa yiNgisi elidumile uFrancis Drake.
Kepha namhlanje kufanele singakhulumi ngomlando wayo kepha ngamabhishi ayo. Ungathola umlando wayo uma unquma ukuvakashela idolobha elisogwini. Inamabhishi amane kuhle kakhulu ukuthi kunokwenzela ukuthi idolobha lingaba kanjani nepulazi ekuqaleni. Kuyinto indawo enhle emindenini abafuna ukuvakasha ngemali encane, ama-surfers noma ojosaka. Amabhishi yiPraia de Belixe, ezansi kwamawa futhi anemibono emihle, iPraia do Martinhal, okungamaphuzu ayishumi okushaywa ngumoya, kanti iPraia do Tonel ihlose ukuntweza olwandle. futhi ekugcineni iPraia de Mareta iyona engcono kakhulu uma ungafuni ukuba izivakashi ezikhuthele kakhulu futhi into yakho ukumane ulele elangeni futhi ujabulele ukugeza ngezikhathi ezithile.
UVila Nova de Milfontes
Yidolobha elisungulwe ngasekupheleni kwekhulu le-XNUMX kanti izakhamizi zalo zokuqala zazingababoshiwe okwadingeka babhekane nokuhlaselwa ngezigebengu eziningana kuze kube yilapho kwakhiwa inqaba ebeka isheke ekuhlaselweni kwezigebengu. Phumula ogwini lwe-Atlantic, ogwini olusentshonalanga ye-Alentejo, maphakathi neLisbon ne-Algarve, futhi unesiphetho esihle nesibanzi somfula uMira.
Kuzungezwe kunamabhishi amaningi kanti ezinye, eziseduze kakhulu, yizindlela ezinhle zabavakashi. Azithandwa kakhulu ngabavakashi bakwamanye amazwe ngakho-ke kukhona abantu bendawo abaningi. IFurnas, Aivados, Ribeira da Azanha, Praia da Franquia neMalhao yizo ezihamba phambili. Amabhishi aseduze nechweba Zivela emanzini athule futhi afudumele yingakho kuyizindawo ezijwayeleke kakhulu. Ugu luhle njengoba lungolwaseCosta Vincentina de Aletejano National Park, ngakho-ke azisoze zaba khona izindawo zokungcebeleka ezinkulu. Kuhle lokho!
I-Alentejo yidolobha elithule, elinamaPutukezi amaningi ehlobo, elinabavakashi abambalwa abavela kwamanye amazwe, kanti iVila Nova de Milfontes yenzelwe bona ngakho-ke akekho umuntu onibulala ngamanani. Isikhathi saso sezivakashi sihlukaniswe kabiliKukhona amaholidi asePutukezi ehlobo (kusuka ekupheleni kukaJulayi kuze kube sekupheleni kuka-Agasti), amaholide amafushane kepha ashubile lapho kunabantu abaningi yonke indawo, kanye nesikhathi esiphansi lapho amaProtugueses asebenza khona.
Ngaphandle kwamaholide ePortugal iVila Nova de Milfontes yindawo ekhululekile, ezolile. Gcina engqondweni into yokuqala yokwenza ukubhuka kusengaphambili, yebo. Isimo sezulu esihle kakhulu siqala maphakathi noMeyi futhi sithatha kuze kube sekupheleni kukaSepthemba. Intwasahlobo ipholile futhi nekwindla nayo ipholile, kepha uma ungafuni ukuhlala olwandle futhi uhlole isifunda, lezi yizikhathi ezinhle zokwenza njalo: ukugibela ibhayisikili, ukuhamba ngezinyawo, ukuhamba emaweni. Ulwandle luhlala lubanda, yebo, phela yi-Atlantic.
Sincoma ukuthi ubone ini kuVila Nova de Milfontes? I- IFort Sao Clemente evikela ukungena esikhumulweni semifula iMira de piratas, manje esiguqulwe saba ihhotela, i indlu yesibani eweni, emlonyeni wesiziba esifanayo, ungayijoyina nechweba kuhambo oluhle lwasogwini, i- I-Church of Our Lady of Grace, ngekhulu le-XNUMX yize ibuyiselwe ku-1959 futhi nakanjani wonke amabhishi. Futhi ungakhohlwa ukuzama i-gastronomy yendawo!
Yize kungelona idolobha elisogwini lolwandle kepha ogwini lomfula, uMfula iGilao, kuyindawo ekhethekile ngoba uthatha isikebhe semizuzu eyi-10 nje futhi ukuso Ilha de Tavira, okuyindawo enamabhishi ayi-14.
UTavira unomlando wasendulo, osukela kuBronze Age kanti abaseFenike, abaseRoma namaMoor badlulile. Idolobha elikhangayo, elinamahhotela, imigoqo, izindawo zokudlela nezindawo zokudlela ezinhle, ibhuloho elidume kakhulu le-arch nezakhiwo eziningi zomlando. Ini ngamakhilomitha angama-20 nje ukusuka emngceleni neSpain kunenzuzo. Kumabhishi, kufanele uwele uye esiqhingini kepha izikebhe zivame kakhulu.
Usuyayazi-ke, uma ucabanga ngePortugal kuleli holide lasehlobo ungakhetha izindawo ezingaziwa kakhulu, ezingathandwa kangako, ezingabizi kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » Portugal » Ehlobo 2016, thola amabhishi athule kakhulu ePortugal
Amabhishi amahle kakhulu eMelika Ephakathi
Izicelo eziyishumi nantathu eziwusizo zokuhamba nezingane